လူမှုမီဒီယာဂုရု Weave ကြောင့်မတရားသောသူလိမ် | Martech Zone
ဆိုးညစ်သူများသည် Social Media များတီထွင်ကြံဆသောသူများဖြစ်သည်
သောကြာနေ့, မတ်လ 27, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒါကညစ်ပတ်တယ် မုသာ၊ မုသာစကားကိုပြော၏။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာ '' ဂုရု '' သည်ဖောက်သည်များအားပြောသောအလွန်ဆိုးဝါးသောကြားနာမှုအားလုံးကိုကြားရသောကြောင့်အလွန်ပင်ပန်းသည်။ မနေ့ကငါလုပ်ခဲ့တယ် Twitter ရှင်းလင်းချက် Linda Fitzgerald နှင့်သူမ၏အဖွဲ့၊ Affiliated Women International တို့နှင့်သင်တန်းပေးခြင်း။ ဤအုပ်စုတွင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောစီးပွားရေးအမျိုးသမီးများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သူတို့ရဲ့စကားများ:
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ "ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအမျိုးသမီးများအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးရန်" ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာအမျိုးသမီးများအားစွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးသည့်နည်းဖြင့်ကြွယ်ဝစေရန်၊ အားပေးရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
အစည်းအဝေးရဲ့ပထမတစ်ဝက်လောက်မှာဒီအုပ်စုပြောခဲ့တာတွေကိုငါဖယ်ထုတ်ပစ်ရတယ်။ ဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး လူတိုင်းကိုခြေတစ်လှမ်းပြန်လှည့်ပြီးငြိမ်သက်အောင်လုပ်ဖို့ကျွန်မကိုတောင်းဆိုတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ခြိမ်းခြောက်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။
Social media sites များသည်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲမပါ။
အကြောင်းပြချက်မှာလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်အကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အသုံးပြုသူအားခွန်အားပေးသည်။ သင်ဖတ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ ဖတ်နိုင်၊ မလိုက်၊ သူ့ကိုယ်သူစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့မတူဘူး ကျွမ်းကျင်သူ သူ၏ဘ ၀ တွင်ရေရှည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုမကျင့်သုံးနိုင်ခဲ့ပါ။
ငါတွစ်တာမှာအလိုအလျောက်တိုက်ရိုက်စာမသုံးသင့်ဘူးလို့မပြောပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ် RSS feed တွင်စာရင်းသွင်းသူ ၅၀၀ ကျော်ကိုထည့်ပြီးပါပြီ။ Twitter မှာနောက်လိုက် ၃၀၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်။ အလိုအလျောက် DM ကြောင့်လူများသည်နောက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မင်းဒါကိုမကြိုက်ရင်ဂရုမစိုက်ပါဘူး ငါ့နောက်သို့မလိုက်ရကြနှင့်။ ဒါမှမဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသူတို့ထဲကရွေးချယ်ပါ!
ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာရောင်းလို့မရဘူးငါ့ကိုမပြောပါနှင့်။ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာရောင်းနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါစာလုံးပေါင်းကိုပြုပြင်ပြီးငါ့အခွင့်အာဏာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအရင်ရောင်းချပြီးပျော့ပျောင်းတဲ့အခါအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေရတယ်။ ငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ် ကျွန်ုပ်၏ကုမ္ပဏီတွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည် ၀ န်ထမ်းများမည်သည့်စကားလုံးကိုမဆိုအပြောင်းအလဲအများဆုံးပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Youtube ပေါ်တွင်ဗွီဒီယိုများကိုထုတ်ဝေရမည်ဟုမပြောပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုအချို့ရှိရန်ဗီဒီယိုများကျွန်ုပ်သည်လူများအားကျွန်ုပ်အားစာသားတွင်သာမကအမြင်အာရုံကိုသိစေရန်ပြုလုပ်ပါသည်။ အဲဒါအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်မဟုတ်ဘူး။ ဗီဒီယိုကိုအဆင်မပြေတဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ်ယောက်ကအဲဒါကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာထက်အဲဒါကိုရှောင်ပါ။
နေရာတိုင်းမှာ ... ကြော်ငြာဖို့မငါ့ကိုမပြောပါနဲ့။ ငါ၌တစ်နေ့လျှင် blog ည့်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ စာရင်းသွင်းသူထောင်ပေါင်းများစွာ၊ နောက်လိုက်များနှင့်အတူအောင်မြင်သောဘလော့ဂ်တစ်ခုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်စကားပြောဆိုမှုများကိုရရှိကြသည်။ ငါနှစ်ခုစတင်၏ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်မိပါတယ်။ ငါ၏အပို့စ်များပေါ်တွင်နှစ်ဆလိုင်းများငါ့ကိုနှောင့်နှေးပုံရသည်။ ငါပျှမ်းမျှရက်သတ္တပတ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည့်နာရီပေါင်းရာနှင့်ချီ။ တစ်လလျှင်နှစ်ရာတန်ရာအနည်းငယ်လောက်လုပ်ရသည့်အတွက်တောင်းပန်သည်မဟုတ်ပါ။
ငါလိုအပ်တယ်ငါ့ကိုမပြောပါနှင့် စကားပြောဆိုမှုတွင်ပါဝင်ရန် ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ။ သင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုသင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါကြိုးစားခဲ့တယ် ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ blog နှင့် Twitter မှ feeds များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြီးတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် login လုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်လုံလောက်ပါသည်။ Facebook က AOL ဗားရှင်း ၂၀ …ဒါမှမဟုတ် MySpace 20 …။ နံပါတ်တွေတိုးလာတယ်၊ သေချာတယ်…ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းတဲ့အရာတခုခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ငါ web ကိုချစ်ကြတယ်ဒါကြောင့် လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တစ်ခုလုံးတွင်ကျွန်ုပ်၏အသွားအလာ၊ ကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုလောင်းကစားတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှု / လည်ပတ်မှု / တိုက်ရိုက် / အရန်ကူးခြင်း / မော်နီတာတွင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါပုံကြီးတစ်ခုနှင့်အီးမေးလ်တစ်စောင်မပို့နိူင်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်မည်သည့်စာသားမျှမရှိပါ။ ငါလုပ်ခဲ့ပြီးငါတို့ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအမြင့်ဆုံးရခဲ့တယ်။ အဲဒါကျော်ယူပါ
cuss ဖို့မပြောပါနဲ့ ကျွန်ုပ်သည်ပရိသတ်ကိုမလေးစားဟုခံစားမိသောကြောင့်၊ အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကျိန်ဆဲခြင်းကိုရှောင်ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းကကျိန်ဆဲချင်တယ်ကွာကွာကျိန်ဆဲပါ! ငါဖတ်ရန်မလိုပါ (အောင်မြင်သောဆိုဒ်များအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်သော်လည်း) ငါမရကိုသာရွေးချယ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ run ချင်လျှင် ငွေအမြန်လုပ်ပါ တွစ်တာရှိအစီအစဉ်များ လုပ်သာလုပ်! အကယ်၍ သင်အမြတ်ရရင်၊ (ငါမင်းနောက်ကိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သင့်ကိုဂရုစိုက်စရာလည်းမရှိဘူး။ ) အကယ်လို့သင် Facebook မှာနောက်တစ်ခုချိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုသွားရှာပါ။ သင်အသုံးပြုလိုပါက Twitter ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုအနေနဲ့, လုပ်သာလုပ်! ငါ၎င်းကိုသတင်းခေါင်းစဉ်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ကျပန်းလင့်ခ်တစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်း၌ပူးပေါင်းခြင်း၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကိုကူညီခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သို့အသွားအလာကိုမောင်းထုတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ငါတစ်ယောက်တည်းနေပါရစေ! ငါလိုချင်ပေမယ့်သုံးနိုင်တယ်။
တင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုသင်တက်ရောက်သည့်အခါဘလော့ဂ်တစ်ခုဖတ်ပါ၊ ဝဘ်နာတစ်ခုကိုလေ့လာပါ ဂုရု အကြောင်းစတင်ပြောဆိုသည် ကွမ်းခြံကုန်းသင်ဘာလုပ်သင့်သည်၊ မလုပ်သင့်သည်၊ သင့်နောက်လိုက်များနှင့်သင်နောက်လိုက်သူများနှင့်သင်၏အချိုးအစားစသည်တို့သည်တံခါးသို့ထွက်သွားသည်…လမ်းမလျှောက်ပါနှင့်။ ဤရွေ့ကား ဂုရု သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၊ သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ သင်၏အရောင်းပုံစံ၊ သင်ထုတ်ကုန်ကိုမည်သို့နေရာချသည်သို့မဟုတ်သင်၏စရိုက်လက္ခဏာကိုမသိပါ။ သူတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ ဖြစ်နိုင်အောင် လူမှုမီဒီယာကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာပြောပြပါ။ !
ငါကြိုးစားခဲ့သောငါ့ပရိသတ်ကိုမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူမျှဝေ, ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန် နှင့် ဘာအလုပ်လုပ်တယ်၊။ ငါသူတို့ရရှိနိုင်သော tools များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် features တွေရှင်းပြပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များနှင့်ပရိသတ်များကိုစမ်းသပ်ရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ငါတိုင်းတာရန်တိုက်တွန်းပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်တော်သောကြားခံတစ်ခုဟုတ်မဟုတ်သေချာစေရန်လုံလောက်သောအားထုတ်မှုများပြုလုပ်ရန်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သောအရာသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်သော်လည်းအပြန်အလှန်အားဖြင့်။
Make သင့်ရဲ့ သင်သွားသည့်အတိုင်းစည်းမျဉ်းများလိုက်နာပါ။ သင်ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာစရာမလိုဘဲတောက်ပတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလိုက်ရှာရင်းအချိန်ကုန်နိုင်တယ်။
Tags: လူမှုမီဒီယာ gurusလူမှုမီဒီယာတည်ရှိသည်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်
မတ်လ 27, 2009 မှာ 2: 52 pm တွင်
မင်းပို့စ်ကဒီနေရာမှာထိတွေ့နေတဲ့ပိုကြီးတဲ့သတင်းစကားကိုငါကြိုက်တယ်၊ ဒါကစည်းကမ်းတွေမရှိဘူး။ သို့မဟုတ်၊ စည်းကမ်းချက်များရှိလျှင်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့ကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်၎င်းတို့နောက်လိုက်ခြင်းထက် ပို၍ အောင်မြင်နိုင်သည်။
မတ်လ 27, 2009 မှာ 4: 24 pm တွင်
မေး။ ။ စည်းမျဉ်းတစ်ခုနဲ့အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
A: စည်းမျဉ်းဆိုတာလူတွေဖန်တီးထားတဲ့အရာပဲ။ ကောင်းသောအကြံအစည်သည်လူများစွာအတွက်၊ လူတိုင်းအတွက်ပင်အကျိုးရှိသည်။
Doug သည်လုံးဝမှန်ကန်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စည်းမျဉ်းများမရှိပါ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အော့ဖ်လိုင်းတွင်ရှိသည်။ သို့သော်ဆိုက်ဘာအာကာသကိုကင်းလှည့်နေသော laywers, cops သို့မဟုတ်တရားသူကြီးများမရှိပါ။
သို့သော်ကောင်းသောအတွေးအခေါ်များနှင့်လွန်စွာဆိုးရွားသည့်အတွေးအခေါ်များရှိနေသည်။ လွန်စွာဆိုးရွားလှသည့်အကြံဥာဏ်ဥပမာတစ်ခုမှာသရေဖျက်မှုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေနေ့က Doug Karr လုပ်ခဲ့သည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအမှုအကြောင်းသင်ကြားဖူးပါသလား။ ကောင်းပြီ, ငါဖွင့်လုပ်သောကြောင့်။ လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းပေါ်ရှိဇာတ်ကောင်များကိုအသရေဖျက်ခြင်းသည်အော့ဖ်လိုင်းတွင်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ဤမှတ်ချက်ကိုအသင့်အတင့်ပယ်ဖျက်ခြင်းအပြင်၊ ဒူးသည်ကျွန်ုပ်၏ဒူးထောင့်ချိုးကိုဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုမှုဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန် Vinny ကိုလှည့်ပတ်သွားနိုင်သည်။
Doug ၏အကြံပြုချက်များသည်လွန်စွာဆိုးရွားသည့်အတွေးအခေါ်များအထက်တွင်ရှိပါသလား။ ငါမထင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဟာကြီးမြတ်တဲ့အကြံပြုချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုံတစ်ပုံတည်းပါ ၀ င်ပြီးသင့်ဖောက်သည်အများစုကိုအထင်ကြီးစေနိုင်သောအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့နိုင်သည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းဖြင့်အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူများအားလည်းကင်းကွာစေလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် Veen ဥပဒေကိုလိုက်နာရန်နှင့်စာလုံးတစ်လုံးကိုဂရပ်ဖစ်တွင်မထည့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားသည်။ (ဒါပေမယ့်တောင်မှမထင်ဘူး Flickr သည်တရားမ ၀ င်ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါထိပ်ပိုင်းပါပဲ။ )
အလားတူစွာ၊ Auto-DMs သည်သင်သာလျှင်နောက်လိုက်အသစ်အနည်းငယ်ကိုသာခွဲခြားလိမ့်မည် ရှိပြီးသား နောက်လိုက်များ၏ 1,000s ။ အကယ်လို့မင်းက twitter အသစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တိုးတက်မှုကိုနှောင့်နှေးစေလိမ့်မယ်လို့ငါခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းငါအကြံပေးမှာမဟုတ်ဘူး။
ဆိုရှယ်မီဒီယာအတွက်စည်းမျဉ်းများမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေရှိတယ်၊ ငါရှာနေတာပဲ။ တစ်ခုခုသိလား
မတ်လ 27, 2009 မှာ 4: 56 pm တွင်
ဒါကပါရမီနှင့်အလွန်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နားထောင် / ဖတ်သောလူများသည်အာရုံစိုက်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက်နှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပညာရေးနယ်ပယ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအရာသည်နည်းပညာလောကရှိတစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အကျိုးမရှိပါ။ ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ။
မာကု "Rizzn" Hopkins
မတ်လ 27, 2009 မှာ 7: 51 pm တွင်
မင်းရဲ့ post ကိုအကြီးအကျယ်သဘောတူတယ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအဆက်မပြတ်ပြန်လည်ရေးသားနေကြသည်။ တကယ်တော့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမရှိဘူး။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်အချို့သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - ထောက်ခံသည့်ဗီဒီယိုစီးရီးကိုဖြန့်ဝေရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများနှင့်မှားသောနည်းလမ်းများရှိသည် (ဥပမာသင်အောင်မြင်လိုလျှင်ဖြစ်သည်) ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်သတင်းစာပညာဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါက (ထိုနှစ်ဆလိုင်းကြော်ငြာများသည်မသင့်တော်သောပုံသဏ္createာန်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်) ဘလော့ဂ်ကိုငွေရှာရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါသည်လည်းမကြာခဏကောင်းသောနှင့်အတူမကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလိုက်နာရန်ငါ့အချိန်အများကြီးဖြုန်းနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ကျွမ်းကျင်သူ" အချို့သုံးလ Mashable နှင့် Techcrunch ၏သုံးလကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလိုလားသူဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ။
မတ်လ 27, 2009 မှာ 9: 38 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာကု! မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်ဟာငါဒီ post ကိုရေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲ။ ငါဒီနည်းပညာကိုခြိမ်းခြောက်မဖြစ်သင့်ကြောင်းဖွင့်ဖြစ်သင့်ကြောင်းလူတွေကိုသိစေချင်တယ်!
မတ်လ 27, 2009 မှာ 11: 25 pm တွင်
“ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာကြီးကအဆင်မပြေပေမဲ့ဆိုက်ဘာအာကာသကိုကင်းလှည့်တဲ့ရှေ့နေတွေ၊ ရဲတွေ၊ တရားသူကြီးတွေမရှိဘူး။ ” ကောင်းပြီ, ရှေ့နေများ, ရဲများနှင့် AND တရားသူကြီးတွေ (အဆုံးစွန်သောတရားရုံး၏ထက်တရားသူကြီးများကိုဖြစ်ခြင်း!) အမှန်တကယ်ရှိပါတယ်, နှင့်အသရေဖျက်မှုနှင့် DMCA အနည်းငယ်ဆိုက်ဘာစပေ့အတွက် (သို့သော်အထင်ရှားဆုံး) အလေ့အကျင့်ရှိပါတယ်။
ငါက "စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ" ဟုပြောရုံတစ်ခုဖန်စီအသစ်သောနည်းလမ်းအဖြစ်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို၏ပျော့သို့မဟုတ်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံအဖြစ်အသုံးပြုသော "အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်" ဟူသောအသုံးအနှုန်းနှင့်အတူငါသဘောမတူ။ အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များကိုစာမျက်နှာကုဒ်တွင်ပိုမိုအသုံးချနိုင်သည်၊ သို့သော်အကြောင်းအရာမဟုတ်ပါ (စတိုင်နှင့်သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းမဟုတ်ဘဲ၊ အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များ FTW၊ စတိုင်သဒ်ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းများသည်အကြောင်းအရာကိုမဖြစ်စေဘူး၊ အကြောင်းအရာများကိုနောက်ခံနှင့်နားလည်လွယ်အောင်လုပ်သည်) အရေးကြီးသောဆက်လက်တည်ရှိသင့်ပါတယ်။
သင်မြင်သည့်အတိုင်း - ကျွန်ုပ်သည်ဤတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသည် - သို့သော်ဆိုရှယ်မီဒီယာဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှုတွင်မည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်ဟူသောစည်းမျဉ်းများမဟုတ်ပါ၊
မတ်လ 28, 2009 မှာ 5: 07 AM
ဤသည်မှာရပ်ရွာလူထုအတွက်အရေးကြီးသော blog post တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသောစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါ။
Great post ။ ဆက်လက်ပြီးရှိသည်။
DM ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုဟာကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ DM နာဇီတွေဘာကြောင့်အာဇီဝတွေဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုပါ။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 9: 52 AM
အတိအကျ လူအချို့က do's နှင့် don'ts များထုတ်ဝေခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကို“ အတွေးခေါင်းဆောင်များ” အဖြစ်သတ်မှတ်လိုကြသည်။ အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလူမှုမီဒီယာရဲ့ Wild West အဆင့်မှာရှိနေပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူး။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 1: 00 pm တွင်
မတ်လ 28, 2009 မှာ 10: 17 AM
စိတ်မကောင်းပါ၊ auto-DM feature သည် spam၊ plain and simple ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်မှုကိုဘာကြောင့်အလိုအလျောက်လုပ်ချင်တာလဲ။ ၎င်းသည်သင်နောက်လိုက်များကိုရိုသေလေးစားမှုမရှိကြောင်းပြသည်။ သင်မှန်တယ်၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်စျေးကွက်သမားတွေအနေနဲ့ငါတို့အရင်ကတခြားသူတွေကိုစပိန်ဖို့ကြိုးစားနေတာလား
လူများကိုဆွေးနွေးရန်ဂရုတစိုက်အားပေးခြင်း - လူတိုင်းတွင်သင်ရှိနေသည့်အနေအထားတွင်ရှိနေသည်ကိုသတိရပါ။ အောက်ခြေအဆင့်ရှိလူများသည်အလုပ်ပြုတ်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အလုပ်ရှင်များသည်ယခင်ကအများပြည်သူနှင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေသည်ကိုတွေ့သောအခါသူတို့၏အနာဂါတ်ပျက်ပြားသွားနိုင်သည်။ လိမ္မာပါးနပ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရှည်လျားသောလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 1: 04 pm တွင်
RE: Spam - Auto-DM ကိုရနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတစ်ယောက်ယောက်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာ opt-in ပါပဲ။ သင်သည်မက်ဆေ့ခ်ျကိုတန်ဖိုးထားသည်ဖြစ်စေ၊ မတန်ဖိုးသည်ဖြစ်စေသင်သည်ထိုသူအားသင့်အားမက်ဆေ့ခ်ျကိုခွင့်ပြုချက်မပေးဟုဆိုလိုသည်
ကျွန်ုပ်သည် Auto DMs များကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားပြီး၎င်းတို့ကို SPAM အဖြစ်မမြင်ပါ။ ငါလိုက်နေတဲ့လူအကြောင်းပိုသိချင်တယ်။ ချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုကအရမ်းကောင်းတယ်။ ၎င်းတို့ကိုဖျက်ရန်မခက်ခဲပါ။
Re: Cussing - လူတွေကို cuss လုပ်ဖို့အားမပေးခဲ့ဘူး။ တကယ်တော့ငါကလူတွေကိုမအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ ငါပြောတာကလူတချို့အတွက်အကျိုးရှိပြီးသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုမထိခိုက်ဘူးလို့ပြောတာပဲ။ ၎င်းသည်လူတိုင်းအတွက်အသုံးမ ၀ င်သော 'စည်းမျဉ်း' တစ်ခုဖြစ်သည် (သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်)
မတ်လ 28, 2009 မှာ 10: 58 AM
တစ်ချိန်ကငါ့ကိုလှည့်စား, သင်အရှက်ကွဲခြင်း။ ငါ့ကိုနှစ်ကြိမ်လှည့် စား၍၊ စကားဝိုင်းတွင်မပါ ၀ င်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စကားပြောဆိုမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးဖြစ်သည် မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ကိုသင်ရောက်သွားလျှင်၊ သင် / run / တိုက်ရိုက် / အရန် / စောင့်ကြည့်။ စောင့်ကြည့်သောဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားလက်ဆုံသည်ထိုနေရာတွင်တိုးတက်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
မင်းအစီအစဉ်ဆွဲပြီးဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ငါပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့အလုပ်ကိုငါလေးစားမယ်ဆိုရင်ငါလုပ်မှာကမင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတခြားနေရာကိုယူပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစိတ်ကူးတွင်ပါဝင်သောအခြားလူများနှင့်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်ပေးထားသောအရာသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ထပ်မံမပါ ၀ င်ပါက၊
မတ်လ 28, 2009 မှာ 1: 06 pm တွင်
ငါအမြဲတမ်းစကားပြောဆိုမှုတွင်ပါဝင်နေတာပါ။ တစ်ယောက်ယောက်က Plaxo, LinkedIn, ဒါမှမဟုတ် Facebook မှာတစ်ခုခုပြန်ဖြေရင်ပဲရှိတယ်။ ကျနော့်အချက်ကတော့အဲဒီဒေသတွေမှာအချိန်ကုန်ခံပြီးအချိန်ဖြုန်းတီးဖို့ငါ 'bang' မလုပ်ရဘူး၊ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာငါ့နောက်လိုက်တွေဆီကိုငါသတင်းပို့လိုက်တယ်။ သူတို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ငါတုန့်ပြန်။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်၏အဓိကဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းအဖြစ်တန်ဖိုးမထားပါ။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 12: 49 pm တွင်
Sheesh, Doug ။ ငါထင်တာကတော့တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းခန်းခြောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကမင်းခန်းခြောက်နေတယ်။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်မင်းကိုငါသဘောတူတယ် (တစ်ခါသာဖတ်ပါ) ။ အားလုံးသတိထားပါ "ကျွမ်းကျင်သူများ။ " ကူညီသူများကိုရှာပါ။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 1: 37 pm တွင်
စိတ်ကူးယဉ် post ကို Doug! “ ငါ့စီးပွားရေးကိုကြီးထွားအောင်ငါဘာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေသုံးသင့်သလဲ။ သူတို့ကိုငါဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ ' ငါမသိဘူး!!! သင်၏လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းအရာများစွာကို ဦး စွာကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာအတွက်တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းလုံးဝမရှိပါ။
သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာမှာသင်၏လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ၍ ကောင်းမွန်သောခန့်မှန်းချက်အချို့ကို အသုံးပြု၍ အစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်၊ အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ရလဒ်များကိုတိုင်းတာရန်နှင့်အလုပ်မလုပ်သောအရာများကိုထုတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 7: 16 pm တွင်
ဒီဟာကိုရေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ 100% သဘောတူသည် ငါက“ လိုင်းမရကြလို့” ရှောင်ဖယ်ချင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Blackball ဒါမှမဟုတ်ဘာကိုမဆိုရယ်မောချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ငန်းနှင့်လုံးဝအဆင်ပြေပါသည်။ ငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းသည်။
အဓိကအချက် - ပညာတတ်ရွေးချယ်မှုလုပ်ပါ။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 7: 28 pm တွင်
re: twitter auto follow - ကျွန်တော်မသုံးပါဘူး၊ နောက်လိုက် ၂၅၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှနောက်လိုက်များတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏“ ကျေးဇူးတင်စကား” နှင့်ဆင်တူသည့်အရာမှန်သမျှကိုဖြေရှင်းရန်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ အချိန်ကုန်မည်၊ နောက်လိုက်များကစုပုံလာသည်။ ငါအော်တိုအောက်ပါများအတွက်အသုံးပြုမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဖြစ်ပေမယ့်ဒါဟာအချိန်ကုန်လေ့ကျင့်ခန်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့တွစ်တာမှာတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး သွားတွေ့မယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် auto follow ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘာမှမရောင်းပါနဲ့။ ရိုးရိုးလေးပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ "ငါ့ဘလော့ဂ်ကိုစစ်ဆေး" auto DMs ငါ့ကိုစိတ်ပျက်။ ရိုးရိုးလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 8: 40 pm တွင်
Doug - Shhhh သင်ကြောင်ကိုအိတ်ထဲကထုတ်လိုက်သည် အကယ်၍ လူများက အကယ်၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါကအထက်တန်းကျောင်းအကြီးတန်းအရာရှိများထက်၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတနည်းပါးသောဆိုရှယ်မီဒီယာဂုရုရှိရန်မလိုပါ။ ထိုကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်“ perကရာဇ်မင်းအဝတ်အစားအသစ်” ရှိစားသောက်ဖွယ်ရာများကဲ့သို့အသုံးဝင်သည်ဟုလည်းသူတို့ကတွက်ချက်နိုင်သည်။
အိုး၊ “ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပြောင်းလဲသွားပြီ” ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတကယ်တော့တည်ရှိနေသောအငွေ့ပျံနေသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိသည့် SEO ဆိုတာ SEO မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စည်းမျဉ်းမရှိပါ။
မတ်လ 28, 2009 မှာ 10: 24 pm တွင်
ဂိမ်းအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် 'ကောင်းသော' အတိုင်ပင်ခံတစ် ဦး နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ချဉ်းကပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအားအလတ်စားတစ်ခုချင်းစီကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ခြင်း၊ ရလဒ်ကိုတိကျစွာတိုင်းတာနိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းအားလုပ်ရန်အချိန်များစွာသက်သာစေနိုင်သည်။ ငါကတစ် ဦး တည်းသွားရန်တိုက်တွန်းခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မှော်ဖော်မြူလာအချို့ရောင်းသောကျွမ်းကျင်သူများကိုသာဆန့်ကျင်ပါသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တယောက်မျှမရှိ။
Yvonne R ကို Thompson က
မတ်လ 28, 2009 မှာ 8: 42 pm တွင်
လူမှုရေးမီဒီယာအသစ်များသည်၎င်း၏နို့စို့အရွယ်တွင်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသောအကန့်အသတ်များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများမှလွတ်မြောက်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်သောဆွဲဆောင်မှုရှိနိုင်သည်။ လွတ်လပ်မှုများကိုသုံးစွဲသူများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊
သုံးစွဲသူများသည်မီဒီယာအသစ်များကိုပိုင်ဆိုင်ရန်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုကြီးထွားစေရန် (သို့) အမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းတွင်သဘာဝကျသောလမ်းစဉ်ဖြစ်ပုံရသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါဖြစ်နိုင်သမျှပုံရသည်သည့်အခါအစောပိုင်းမင်းမဲ့စရိုက်အဆင့်ကြိုက်တယ်: ဒါဟာအလွတ်ကင်းဗတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မလွှဲမရှောင်, သို့သော်, လူသားမြားသဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်နှစ်သိမ့်မှပြန်လည်ရောက်ရှိ။
Janice Dimaano (LADYwSENSE)
မတ်လ 29, 2009 မှာ 9: 03 AM
မင်းရေးခဲ့သမျှကိုဖတ်တဲ့အခါငါလွတ်လပ်မှုရခဲ့တယ်။ တွစ်တာမှာအသစ်သောအရာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီးအစပိုင်းမှာငါအရမ်းရှက်တယ်။ ငါစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်။ အခြားသူများထံမှသင်ယူခြင်းနှင့်အခြားသူများထံမှဝေမျှခြင်းနှင့်သင်ယူခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန် Twitter ၏လက်ဆောင်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်း။
တစ်ချိန်ကငါဖတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုမတင်နိုင်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တုိ့၏တုန့်ပြန်မှုများကိုသူနာပြုများအကောင်အထည်ဖော်သည့်အထိရောက်ဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့် tweeting များကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်သင်ကြုံတွေ့နေရသည့်အရာများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းစသည်တို့ကိုရိုးရိုးသားသားတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ မင်းအတွင်းပိုင်း ၎င်းသည်ဘဝ၏နာကျင်မှုနှင့်ဖိအားများကိုသက်သာစေရန်နှင့်သက်သာစေရန်ကူညီပေးသည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အမြင်များနှင့်စတိုင်လ်များကိုလည်းဖော်ပြနိုင်သည်။ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်
မတ်လ 29, 2009 မှာ 12: 24 pm တွင်
အလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နေသူတစ် ဦး ထံမှသတင်းအချက်အလက်များကိုဖတ်ရှုရန်လန်းဆန်းစေသည်။ ငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလုပ်နေတာကနေသူအတွေ့အကြုံရှိပြီးသူဟာမှန်တယ်ဆိုတာသိလို့ပဲ။
အဓိကအချက် - သင်ဆန္ဒရှိသည့်လူမှုမီဒီယာကိုအသုံးပြုပါ။ သင်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်ဆောက်လိုလျှင် အဲဒါကိုသွားပြီးအလုပ်လုပ်တာကိုသုံးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, Facebook ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဆက်လက်သုံးစွဲပြီးဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်သောကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ယောဟနျသ Jantsch - ပြွန်တိပ်စျေးကွက်
မတ်လ 29, 2009 မှာ 4: 24 pm တွင်
ဟုတ်ပါတယ်၊ Doug ရဲ့အန္တရာယ်ကမင်းဟာ dos ပေးဖို့နီးကပ်စွာစကတ်စကတ်စကတ်စကတ်ကိုဝတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်ပါနဲ့၊
ငါထင်တာကတကယ့်မက်ဆေ့ခ်ျဖြစ်တယ်၊ ငါ့စိတ်ထဲမှာမင်းဒီအချက်ကိုပြောလိုက်တယ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိရိယာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသုံးပြုမှုကိုမင်းရဲ့စျေးကွက်နဲ့သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကအမြဲလွှမ်းမိုးထားသင့်တာပါပဲ။ အချို့သောသူများ၏လူမှုရေးမီဒီယာကိုသင်မည်သို့အသုံးပြုသင့်ကြောင်းသင့်အားမည်သို့ပြောမည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ အချို့သူများအတွက်ထိရောက်သောရှုထောင့်မှကြည့်ပါ။ ။ ။ နှင့်သင်အကြံပြုနေသောနည်းလမ်းများသည်သင်နှင့်အခြားသူများအတွက်သိသာထင်ရှားသည်။ သို့သော်အားလုံးအတွက်မဟုတ်ပါ။
မတ်လ 29, 2009 မှာ 5: 31 pm တွင်
မင်းကမင်းကိုကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်။ ငါမင်းကိုငါထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါခြိမ်းခြောက်ချင်ကြဘူး, ငါလုပ်ပိုင်ခွင့်ချင်တယ်။ လူများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာအတိုင်ပင်ခံသည်ဘက်မလိုက်ဘဲသိသင့်သိထိုက်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်တော်ကပရိသတ်ကြီးပါ StumbleUpon, ဒါပေမယ့်ငါကငါ့ထက် browsing အလေ့အထများနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပိုမိုကိုက်ညီကြောင်းကိုငါအသိအမှတ်ပြုသည် digg။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များ Digg ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ပြီး StumbleUpon ပေါ်သို့ခုန်ချသင့်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
အဲဒီအစား၊ တစ်ခုချင်းစီကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ၊ ထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေ၊ သူတို့အရင်ကလုပ်ခဲ့တာတွေကိုရှင်းပြပြီးလူတစ်ယောက်စီကိုစမ်းသပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သူတို့၏ကြိုးပမ်းမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာ။ မည်သည့်အကျိုးရှိသည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။
မတ်လ 31, 2009 မှာ 10: 54 pm တွင်
မင်း Doug ရေးခဲ့သမျှကိုမင်းသဘောတူတယ်၊ သြစတြေးလျမှာလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်။
ငါကျင့်သုံးသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဘုံယဉ်ကျေးခြင်းနှင့်အခြေခံအမူအကျင့်များစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖြစ်ကြသည်ထင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဝဘ်ပေါ်မှဖြစ်ကောင်းဖြစ်သော်လည်းယဉ်ကျေး။ လေးစားမှုမရှိသင့်ဟုမဆိုလိုပါ
ဧပြီ 9, 2009 မှာ 11: 02 pm တွင်
24:2011 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 28
မည်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုတကယ်ရှိပါတယ်; ချန်နယ်၊ လူမှုရေး၊ တိုက်ရိုက် / ကက်တလောက်၊ အီးမေးလ်၊ ဘေးဖယ် FTC ပြဌာန်းသောမဆိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကနေ။ ရလဒ်များသည်သင်၏ပရိသတ်အပေါ် အခြေခံ၍ အကြီးအကျယ်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်မည်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရမည်ကိုသင်တွက်ဆနိုင်သည်။